चेरी ब्लास्ट सबै भन्दा राम्रो को छ कुनै जम्मा स्लट ताजा र रंगीन फल को विषय मा आधारित. यो खेल तपाईं स्वस्थ रहन फल उपभोग गर्नुपर्छ भनेर सिद्ध रिमाइन्डर छ. खेल को रील मा धेरै आकर्षक हेर्न भनेर विदेशी र पौष्टिक फल विशेषताहरु. यो पाँच रील स्लट खेल विभिन्न विजेता संयोजन प्रस्ताव बीस शर्त-तरिका छ. को रील को प्रतीक को सौन्दर्य बढाउँछ एक टिल सार वालपेपर को पृष्ठभूमि सेट छन्. तपाईं सबै तरिका energized राख्न छिटो upbeat पृष्ठभूमिमा संगीत छ. यो सट्टेबाजी यहाँ £ 0.20 को राशि सुरु र अधिकतम बस £ 40 प्रति पालो छ. त्यसैले एक खेलाडी को सबै प्रकारको लागि पूर्ण बजेट स्लट.
चेरी ब्लास्ट विकासकर्ता बारेमा
यो रंगीन कुनै जम्मा स्लट खेल फलाम कुकुर विकास भएको थियो (NYX). विभिन्न खेल प्रविधिहरू मा कौशल संग एक रचनात्मक स्लट विकास कम्पनी तिनीहरूलाई विभिन्न मोबाइल उपकरणहरू समर्थन गर्न सम्भव बनाउँछ कि. त्यसैले तपाईं आफ्नो खेल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ जाने बेलामा.
यो को प्रतीक कुनै जम्मा स्लट खेल स्ट्रबेरी छन्, kiwis, प्लम, कागति, तरबूज, रातो 7s, सुनको Bells र दुई सुनको चेरी. शीर्ष तिर्ने प्रतीक आफ्नो खम्बामा 1000x तिर्ने सुनको चेरी छ. तपाईं एक payline मार्फत आफ्नो तरिका को पाँच भूमि गर्न आवश्यक छ कि जीत. किनभने त्यहाँ ती आठ छन् यो खेलको विशेषता बोनस सुविधाहरू छन्. पीसी खेल Pacman एक एप्पल, रातो र हरियो शाही ढाल, रातो तारा, रातो र हरियो शाही crowns, दुई चेरी बम र एक चेरी बम को बोनस छन्.
चेरी बम बोनस: को चेरी बम को प्रतीक बीचमा रील मात्र केन्द्र भूमि गर्न सक्छन्. जब यो देखिन्छ तपाईं चार सुविधाहरू कुनै पनि प्राप्त गर्न सक्छन्.3स्क्याटर प्रतीक, अप गर्न पाँच wilds, निःशुल्क spins वा खेल कुनै पनि अन्य बोनस. जुम्ल्याहा चेरी बम मात्र मुक्त spins र समान सुविधाहरू पुरस्कार समयमा देखिन्छ कि प्रतीक हो.
ड्यास बोनस: जब तपाईं तीन पटक यो एक स्पिन बेला स्याउ प्रतीक भूमि कुनै जम्मा स्लट खेल, तपाईं बोनस स्तरमा लिएको हो. यो Pacman खेल समान छ र तपाईं देखि कठिनाई स्तर चयन गर्न आवश्यक 1 गर्न 5. उच्च कठिनाई स्तर तल्लो व्यक्तिहरूलाई भन्दा राम्रो पुरस्कार छ.
जंगली र स्क्याटर: रातो र हरियो crowns जंगली र स्क्याटर प्रतीक क्रमशः प्रतिनिधित्व. जंगली बोनस बाहेक सबै प्रतीक लागि कवर. स्क्याटर तपाईं 80x को सिक्का जीत दिन्छ मा तीन प्रतीक अवतरण.
बोनस सुविधा र रंगीन ग्राफिक्स को एक भीड संग, यो कुनै जम्मा स्लट खेल सबै भन्दा राम्रो इनामदायी स्लट छ. एक RTP संग 94%, तपाईं विभिन्न उच्च खम्बा पुरस्कार जित्न सक्छौं.